Iprofayile yenkampani kunye neNkcubeko yeshishini- iDongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.
Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.ezikhethekileyo kwiimveliso zentsimbi engenazingcingo ibekwe kwiNgingqi yeShishini leSongbaitang leDolophu yaseChangping, kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong. Ukuthuthwa kulula kakhulu kwaye kusondele kwizibuko laseShenzhen. Umzi-mveliso wethu ugubungela iimitha ezingama-25,000square, kwaye esinye isityalo esingama-30,000 seemitha siphantsi kolwakhiwo. Isityalo sethu siqukethe umatshini wokuchwetheza, iimveliso zentsimbi engenazingcingo zihlanganisa umasifundisane, umasifundisane weplati yesinyithi, ikhabethe yentsimbi engenazintsimbi, kunye nendibano yesinyithi.
We are special in stainless steel balustrade & handrail, grating & drain, high quality metal wall divider & sheet metal, stainless brackets for isikhululo sikaloliwe. Zintandathu kuphela iiNqaku kunye namawaka emveliso. Zonke iimveliso zamkela ibanga le-304 kunye ne-316 yentsimbi engenasici ngeendlela zokugqiba ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabaxhasi bethu Ukuza kuthi ga ngoku, iimveliso zethu zithengiswe kakuhle kakhulu kwaye zaziwa kwintengiso yasekhaya nakwamanye amazwe, kubandakanya iHongKong, iSingapore, iAustralia, iYurophu, uMntla Melika kunye nakuMbindi Mpuma.
I-JKL ibambelela kwifilosofi yeshishini "lokufuna ukusinda ngomgangatho, ukukhula kunye nezinto ezintsha, kunye nokwenza ukuhambelana nenkonzo". Siphumelele isihloko kunye nesatifikethi "seMveliso eziDumileyo zaseTshayina", "iiNdawo eziDumileyo zaseTshayina", "iiMveliso eziKhethiweyo zaseTshayina zoLwakhiwo lweProjekthi", kunye "neMveliso zikaZwelonke ezinokuthenjwa" .Siphumelele igama elihle, kwaye ifuthe lenyukile ngosuku emini. I-JKL ngoku yaziwa ngokuba "yingcali yezakhiwo zentsimbi yaseTshayina."
I-JKL iphumelele inkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001-2015, iphumelele isihloko sophawu oludumileyo lwePhondo laseGuangdong.I-JKL lilungu elinye loMbutho woLwakhiwo lweZakhiwo laseGuangzhou.
Sigxininisa kuphuhliso lwenkcubeko yethu: ukusebenzela abathengi kunye nokukhula kunye; ukuhlonipha abathengisi bethu kunye nokufikelela kwimeko yokuphumelela; Ukunyamekela abasebenzi bethu kunye nokwabelana kunye. Ngokuphuhlisa inkcubeko yokudibana, imveliso yethu kunye nenqanaba lokuthengisa liyakhula imihla ngemihla. Sitsale iingcali ezininzi ukuba zijoyine inkampani yethu, kwaye inqanaba lethu lolawulo linyukela kwi-internationalizaton.
Injongo yethu yophuhliso lwexesha elide kukuba ibe lelona shishini lidumileyo lokuvelisa izixhobo zePearl River Delta kwaye sibeke umzekelo olungileyo kubalingani bethu! Ngomgaqo wokushishina wokubonelela abathengi ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo, ukwakha ngakumbi nangakumbi ulwakhiwo lokuqala.
Wamkelekile kwi-JKL kwaye sizimisele ukusebenzisana nawe. Masenze ikamva eliqaqambileyo kunye
Stainless Handrail, Zokubambelela, Nkqo Handrail izibiyeli, Enyangweni Handrail isibiyeli, Stainless ilifti Handrail, Plate yeSiseko seZandla,